Mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nhasi vadzinga basa vaimbove mutongi wedare remhosva repamusoro, Amai Erica Ndewere, mushure mekunge vawonekwa kuti havachakodzeri kuti varambe vari mutongi wedare iri nekomiti yakaumbwa kuti ivaongorore.
Komiti iyi yaitungamirwa nevaimbove mutongi wedare repamusoro, VaSimbi Mubako, uye munyori wayo ari munyori webazi rezvemitemo, Amai Virginia Mabhiza.
Komiti iyi inoti yakawana Amai Ndewere vaine mhosva mbiri dzekutadza basa.
Komiti iyi yatambidza VaMnangagwa zvayakawana uye zvichitevera kutambira gwaro iri, VaMnangagwa vazivisa nhasi masikati kuti vabvisa Amai Ndewere semutongi wedare repamusoro.
Izvi zvaziviswa nemunyori wedare remakurukota nehofisi yemutungamiri wenyika, VaMisheck Sibanda, avo vati VaMnangagwa vadzinga basa Amai Ndewere vachishandisa simba ravanopihwa nebudmbiro remitemo yenyika.
VaMnangagwa nhasi vadomawo imwe komiti kuti iongorore mutongi weHigh Court kuBulawayo, Justice Thompson James Mabhikwa, panyaya yavari kupomerwa yekuti vakadzikisira chimiro chehofisi yevatongi apo vakadanana nemumwe mudzimai wavaishanda naye pamwe nekumutumira mifananidzo yavo vasina kupfeka.
Komiti ichaongorora VaMabhikwa inotungamirwa nevaimbove mutongi wedare reHigh Court, VaMafios Cheda.
Dzimwe nhengo dzekomiti iyi magweta anoti Mai Phillipa Phillips naVaChaka Mashoko.
Komiti iyi yapihwa mwedzi mitatu kuita basa rayo.
Zvichakadai, Judicial Service Commission nhasi yazivisa kuti iri kutsvaga vanhu vapfumbamwe kuti vadomwe kuve vatongi vedare reHigh Court.
Kuti munhu adomwe kuve mutongi weHigh Court anofanira kunge aiine makore makumi mana kana kudarika uye ari gweta rashanda kwemakore manomwe kana kudarika.